Monday March 30, 2020 - 08:55:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caalami ahaan dadka udhintay cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ayaa korortay waxayna gaartay 33,244 oo qof halka dadka uu asiibay ay ka badanyihiin 700-kun oo ruux.
Meesha ugu badan ee Covid19 uu dadka ku asiibay waa dalka Mareykanka oo ay lajiifaan dad ka badan 120-kun oo ruux, dalka Talyaaniga ayay dhimashadu gaartay 10779 qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka xukuumada Roma.
Wadanka Spain dhimashada ayaa gaartay 6500 halka Faransiisku ay dhimashadu kor udhaaftay 2700 oo qof, dhinaca wadanka Mareykanka dhimashadu waxay kor udhaaftay 2467 qof.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kalimad uu jeediyay ku sheegay in maalamaha ugu horreeya ee bisha April ay suurtagal tahay in ay kororto dhimashada dadka Americanka ah isagoo hadalyay ayuu yiri Trump "Maalmo adag ayaa na sugaya waxaa dhici karta in dhimashadu sare ukacdo".
Trump ayaa ku faanay in tallaabooyinka ay xukuumaddiisu ka qaadday faafidda cudurka Carona ay sababtay in dhimashadu badan laheyd, wuxuu carrabaabay in haddii aan cudurka lala tacaali laheyn ay dhiman lahaayeen dad gaaraya 2 milyan oo qof American ah.
R/wasaaraha dowladda Faransiiska ayaa isna sheegay in 15-ka maalmood ee bisha April uu Carona si xowlli ah ugu dhax faafi doono bulshada Faransiiska wuxuuna saadaaliyay dhimasho iyo bukto badan.